Doqdoqqeewwan magaalaa Finfinnee ittifaman komii kaasan - BBC News Afaan Oromoo
Doqdoqqeewwan magaalaa Finfinnee ittifaman komii kaasan
10 Adooleessa 2019
Image copyright Fortune News Paper
Ashannaafii Ahimad fi Girmaay magaalaa Finfinnee keessatti doqdoqqee oofuun ofii fi maatii isaanii jiraachisu. Ashannaafiin waggoota 10 darbaniif magaalattii keessatti namootaa fi meeshaalee deddeebisaa ture.
"Qarshiis ta'e meeshaa geessi jedhamee natti kennamaa ture amanamummaan qaqqabsiisaan ture" jedha abbaa ijoollee lamaa kan ta'e Ashannaafiin.
Jarreen lamaanuu jireenyi isaanii guutummaatti doqdoqqee oofuu irratti kan hundaa'e akka ta'e dubbatu.
Haa ta'u malee erga magaalaan Finfinnee Waxabajjii 30 A.L.I irraa eegalee doqdoqqeen magaalattii keessa akka hin sochoone ittiseen booda hojii dhaabanii guyyaa eeggachaa jiraachuu himu.
Yakkawwan Motaraa Finfinnee keessatti dagaagaa jiran
Ibsi Iskindirfaa kennaa turan mormiin bittinnaa'e
Finfinneen barattoota kuma 600'f 'yuunifoormii' bituufi
Bulchiinsi magaalatti hanni doqdoqqee fayyadamuun raawwatamu nageenya jiraattotaaf yaaddessaa ta'aa dhufeera jechuun ture akka hin sochoone kan ittise.
Doqdoqqeewwan magaalattii keessa socho'uu fedhan galmee barbaachisaa akka taasisaniifi waajjira geejjibaa magaalattiitti dhiyaatanii ulaagaa barbaachisu akka guuttatan gaafataniiru.
Kanneen dhunfaan hojjetaa turan gurmaa'anii bifa seera qabeessa ta'ee akka hojjetan bulchiinsi magaalattii waamicha dhiyeessee ture
Ashannaafiin garuu gurmaa'aniis ta'e fala biraa uummatanii hojjechuuf yeroon kenname baay'ee gabaabaa ture jedha.
Hojii isaanii irraa haala kanaan buqqaafamuun sirrii miti jechuun namoonni doqdoqqee oofan wal gahanii hiriira bahanii akka tures ni dubbata.
Hiriirri kun kan bahame Waxabajjii 26 ta'us "qaamni gaaffi kaasneef deebii kenne hin jiru, wantichi waan abdii qabu hin fakkaatu" jedha Girmaay.
Ashannaafiinis dhimmicha qaama furmaata kennuu danda'utti dhiyeeffachuuf amma booda fedhii waan qabu miti.
Ashannaafiin mootora oofuun alatti hojii biraa eegaluuf yaada hin qabu. Yeroo ammaas hojii dhaabee lafa taa'aa akka jiru hima.
Galii mootora oofuun argataniin ijoollee kan guddisan, maatii isaanii kan gargaaran jiru kan jedhu Ashannaafiin tarkaanfiin mootummaan yakka to'achuuf fudhate, namoota hedduu hojii dhabsiisuu hin qabu jedha.
Bulchiinsi magaalatti Adoolessa tokko eegale doqdoqqee dhorka jedhus akka Ashannaafin jedhutti garuu Waxabajjii bultii 15 eegale akka isaan dhaabsisan hima.
Girmaayis Waxabajjii bultii 28 eegale akka isa dhorkan dubbata.
Dhaabbanni 'ZMall Delivery' jedhamu magaalaa Finfinnee keessatti hojii nyaata fayyadamtootaaf ergu hojjeta.
Abbaan qabeenyaa dhaabbata kanaa Obbo Ambaaye Mikaa'el tarkaanfii mootummaa hojiin isaaniitti rakkoo fiduu hima. '' Doqdoqqeewwan keenya dhaabataniiru,'' jechuun himu.
Hakiima Ilkaanii kan ta'an Dr. Sable Maammoo meeshaalee wal'aansaaf barbaachisan laaboraatoorii isaanii galfachuuf doqdoqqee kireeffatanii akka hojjechaa turan dubbatu.
Amma garuu meeshaalee wal'aansaa dhiyeessuu waan hin dandeenyeef maamiloonni isaanii mufataa jiraachuu fi hojiinsaanii gufachaa akka jiru eeran.
Obbo Ambaayeen seerichi akka ifa ta'uuf aanga'oota mootummaa sadarkaa garaagaraarra jiran gaafatanillee namoonni seericha baasan torbee darbe keessa galmee eegalan jedhu.
Ulaagaa bulchiinsi magaalichaa gaafate hundaa akka guutan kan dubbatan Obbo Ambaayeen ''Doqdoqqeerratti GPS maxxansuu, konkolaachistoota doqdoqqee uffata seeraa uffachiisuu, ulaagaawwan jedhan guuttannee dhiyaannullee saffisa barbaanneen dhimmi keenya nuuf xumuramaa hin jiru'' jedhan.
Eenyuun akka gaafatan kan ifatti hin beeknee fi qaamni itti gaafatamaa ta'e wanti beekame hin jiru kan jedhan Obo Ambaayeen kanarraa kan ka'es waajjiraalee mootummaarra deemanii yeroosaanii gubaa jiraachuu dubbatan.
Balfa keessaa maal baasuu dandeessu?
Hoogganaa Itti Aanaan Dhaabbata 'ZMall Delievery' jedhamuu Tamasgeen Gabrahiwot rakkoo geejjibaa magaalattii keessa jiru furuuf fialnnoiowwaan geejjibaa hedduun jiraachuu qabu jedhan.
''Yeroo ammaa doqdoqqeewwan tajaajila si'ataa gatii madaalawaadhaan kennaa jiru' jedhan.
Kantiibaa Itti Aanaan Magaalaa Finfinnee Taakkalee Uumaa ALI Waxabajjii 12, bara 2011 ibsa kennaniin magaalattii keessatti doqdoqqee fayyadamuun saamicha geggeeffamaa jiraachuu dubbatanii turan.
Doqdoqqeewwan lakkoofsi gabatee isaanii kan Finfinneetiin ala ta'etu rakkoowwan mudataa jiran keessatti adda durummaan hirmaataa jiru jechuunidha Kantiibaa Itti Aanaan kun Waxabajjii 30 darberraa kaasee doqodoqqeen magaalattii keessa akka hin sochoone kan beeksisan.
Finfinneen barattoota mana barumsaa mootummaa kuma 600'f 'yuunifoormii' bituufi
Ibsi 'Manni Maree Baalaadaraa' kennaa ture mormiin isa qunname
'Waggoota 30 ol naacha waliin...'
Indiyaan imala gara Addeessaa deebitee yaaluufi
Buufati Xiyyaaraa Boolee imaltoota hedduu keessummeessun seenaa haaraa dalage